श्रीमानले धेरै सेक्स गरेको भन्दै लकडाउन खोल्न आग्रह – Yug Aahwan Daily
श्रीमानले धेरै सेक्स गरेको भन्दै लकडाउन खोल्न आग्रह
युग संवाददाता । ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १२:४३ मा प्रकाशित
1917 पटक हेरिएको
काठमाडौ, ११ बैशाख ।
विश्वभर कोरोना महामारी डरलाग्दो बन्दै गएको छ । अहिले विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वमा २७ लाख भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् । ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या १ लाख ६० हजार भन्दा धेरै रहेको छ ।कोरोनाभाइरसको कारण विश्वका धेरैजसो देशहरूमा लकडाउन लागू गरिएको छ । नेपालमा बैशाख १४ गतेसम्म लकडाउन लागु हुँदा भारतमा पनि लकडाउनको म्याद ३ मे सम्म बढाइएको छ । यस समयमा मानिसहरू घरहरूमा बन्द छन् । कोरोना फैलावटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यी कदम चालेका हुन् । लकडाउनको कारण मानिस दैनिक आवश्यकताका बारेमा चिन्तामा छन् । तर केही अफ्रिका लगायत देशहरूमा महिलाहरूले लकडाउनका कारण धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका समाचार बाहिर आएका छन् । अहिले घरमा बन्द भएकाहरु टिभी, मोबाइल, इन्टरनेट बाहेक आफ्नो यौ न जीवनको आनन्द पनि लिइरहेका छन् । नेपालमा अहिले ‘अभागीले विहे गरेको समयमा भुकम्प आउँछ, भाग्यमानीले गर्दा लकडाउन हुन्छ’ भनेर ब्यंग्य गर्ने गरिएको छ । यसमा कसैले पनि आशंका गर्न सक्दैन कि मान्छेहरु आफ्नो इच्छा अनुसार हर सम्भव कायर्हहरु गरिरहेका छन् । तर नेपालीमा नै ‘धेरै खायो भने चीनी पनि तितो हुन्छ’ भन्ने अर्को उखान पनि रहेको छ । यस्तै घटना अफ्रिकी मुलुकहरुमा पुरुषहरुले अत्याधिक यौ न चाहना राख्दा त्यहाँका महिलाहरु चिन्तामा परेका छन् । दिन रात आफ्ना पतिले बारम्बार गरिरहेको यस हर्कतले दुःख पाइरहेकी एउटी महिलाको पिडा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
भिडियोमा उल्लेख गरिए अनुसार लकडाउनका कारण बेरोजगार भएका उनका श्रीमान घरमा बारम्बार यौ न सम्बन्ध राख्न खोजिरहेका हुन्छन् । यो घटना अफ्रिकी देश घानाको हो । यहाँ आफ्ना श्रीमानका कारण तनाबमा आएकी एक महिलाले एउटा भिडियो बनाएर सरकारको अगाडि आफ्नो पीडा व्यक्त गरिन् । उक्त महिलाले घानाका राष्ट्रपति नाना अकुफो एडोजलाई लकडाउन समाप्त गर्नका लागि अपील गरेकी छिन् । यो भिडियो विभिन्न युट्यब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ । जसमा महिलाले लकडाउन समाप्त गर्न सरकारलाई अपील गरिरहेकी छिन । घानाका स्थानीय मिडियामा यो भिडियोलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित हुँदैछन् । आफ्ना श्रीमानबाट भइरहेको यस व्यवहारबाट हैरान भएकी ति महिला तत्काल उनी काममा गएको हेर्न चाहान्छिन् । यसकारण उनले सरकारसँग लकडाउन समाप्त पुर्ण रुपमा नभए पनि सबै कार्यालय खोल्न अपिल गरेकी छन । ताकि उनका श्रीमान् काममा जान सकून् र उनले त्यस्तो समस्याहरूको सामना गर्नु नपरोस् ।
घानाको स्थानीय मिडियामा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार धेरै महिलाले आफ्नो पतिको बारेमा यस्तो खालको खुलासा गरिरहेका छन् । पतिले पटकपटक गरिरहेको यौ न सम्बन्धको मागबाट उनीहरु आजित भएका छन् । महिलाहरु भन्छन, ‘धेरै यौ नसम्पर्क गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेको छ । तर श्रीमानको माग घटिरहेको छैन ।’ ट्विटर सहित अन्य सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भइरहेको एक भिडियोमा महिलाले भनिरहेकी छिन, ‘मेरो निन्द्रा खुलेको हुँदै मेरा पति यौ नसम्बन्ध राख्न तयार भएर बसेका हुन्छन् । पहिले उसलाई सन्तुष्ट पार्छु, र भान्सामा गएर खाना पकाउछु । उसले खाना खान्छ, त्यसपछि टिभी हेर्छ अनी फेरि यौ न सम्पर्कको माग गर्दछ । त्यसपछि खाली यौ नसम्पर्क । फेरि यौ नसम्पर्क ।
अर्को पटक पनि यौन सम्पर्क । के महिलाहरू लकडाउनमा यौन सम्पर्कका लागि बसिरहेका छन् ? कि हामी वास्तवमा कोरोनाभाइरसको डरमा बन्द भएका छौं, हामी आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न लकडाउनका छौं, सही ? मेरो श्रीमानले धेरै यौन सम्बन्ध राख्नु भएको छ । म सरकारबाट मद्दत चाहन्छु ।’ हामी तपाईंलाई बताउन चाहन्छौ कि घानामा हालसम्म ८३४ भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ । जबकि ९ जनाको मृत्यु पनि भैसकेको छ । यहाँको सरकारले सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अप्रिलको पहिलो हप्तामा लकडाउनको घोषणा गर्यो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले उक्त महिलाको भाइरल भिडियोको उद्धृत गर्दै यो समाचार प्रकाशित गरेका छन् । अहिले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि यसलाई स्थान दिएका छन् । लकडाउनमा एक महिला आफ्नो पतिको अत्यधिक यौ न इच्छाबाट हैरान छिन् ।
पतिको हर्कतबाट ति महिलाले भनिन, ‘म मेरा पतिको अनौंठो व्यवहारबाट चिन्तित छु ।’ जानकारी अनुसार ति महिला आफुले काम गर्ने कार्यालयमा घरबाट भागिन् । त्यहाँबाट नै उनले यो भिडियो बनाएर पोस्ट गरिन् । हामी आशा गर्छौ कि उनको समस्यालाई सम्बन्धित पक्षले गम्भीरताका साथ लिएर केही कदम चाल्नेछ । यौन सम्पर्कका लागि एकजना मात्रै तयार भएर हुँदैन यो २ जनाको सहमतिमा हुने कुरा हो । यसरी महिलामाथि जबरजस्ती भइरहेको दबाबका लागि प्रशासनले तत्काल कारबाही अगाडी बढाउनुपर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् । (समाचार एजेन्सीबाट)
नारायण गोपाल साँझ गर्दै बागिना